ओली-प्रचण्डलाई ए'मसी'सीबारे बोल्ने अधिकार नै छैन भन्दै भीम रावलले फेरी फर्काए यस्तो क'डा जवाफ, हेर्नुहोस के भने ? - Hamro Abhiyan
ओली-प्रचण्डलाई ए’मसी’सीबारे बोल्ने अधिकार नै छैन भन्दै भीम रावलले फेरी फर्काए यस्तो क’डा जवाफ, हेर्नुहोस के भने ?
काठमाडौँ । नेकपा स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले एमसीसीबारे अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बोल्ने अधिकार पार्टी केन्द्रीय समितिले नदिएको बताएका छन् । उनले पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले ए’मसी’सी अध्ययन गर्ने जिम्मा कार्यदललाई दिएको र यसबारे पार्टीका कुनै व्यक्तिलाई बोल्ने अधिकार नभएको बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा र संसद बाहिर पनि एमसीसी पारित हुन्छ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिबारे सोधिएको प्रश्नमा नेता रावलले केन्द्रीय समितिले कार्यदललाई ए’मसी’सी अध्ययनको जिम्मा दिएकाले यसबारे कसैलाई पनि बोल्ने अधिकार नभएको टिप्पणी गरे।उनले भने,’म पनि सार्वजनिक रुपमा ए’मसी’सीबारे बोल्थें नि त्यही भएर नबोलेको हो।’नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि ए’मसी’सी अगाडि बढ्ने बताउँदै आएका छन्।
ए’मसी’सीबारे नेकपाले गठन गरेको कार्यदलको म्याद थपपछि आइतबार बैठक बसेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई नेता रवालले ए’मसी’सीबारे कार्यदलले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको विषयसँग रहेर अध्ययन गरिरहेकाले प्रतिवेदन तयार गर्न केही ढिला भएको बताए। उनले ए’मसी’सीसँग सम्बन्धित एक दर्जन सम्झौताहरु भएको र तिनको पनि अध्ययन भइरहेको बताए।दोस्रो पटक थपिएको म्यादभित्रै प्रतिवदेन बुझाउने आइतबार बसेको कार्यदलको बैठकले निर्णयगरेको उनले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार ‘एमसी’सी परियोजनाले नेपाली अर्थतन्त्रको तस्बिर बदलिदिने दाबी गरेका थिए । संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा शनिबार उनले ए’मसी’सीले नेपालको अर्थतन्त्र र ऊर्जा उपयोगको तस्बिर बदलिदिने दाबी गरेका हुन् । नेपाल सरकार र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको सम्झौताले नेपालको सडक र ऊर्जा क्षेत्रमा संयुक्त लगानी गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। सम्झौतामा रहेका कतिपय व्यवस्थालाई लिएर नेकपाभित्र विवाद रहेका बेला ओलीले संसद्‍मा यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
‘आगामी ५ वर्षभित्र यो ए’मसी’सी योजना पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिकव्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र ऊर्जा उपयोगको तस्बिर बदलिने निश्चित छ,’ ओलीले भने। अमेरिका सरकारको ५० अर्ब र नेपालको १३ अर्बको लगानी रहेको ए’मसी’सी परियोजनाले राष्ट्रिय गौरवको पहिचान प्राप्त गरेको उनको भनाइ थियो। ‘ए’मसी’सी कम्प्याक्ट अन्तर्गत गोरखपुरसम्म प्रशारण लाइन दीर्घकालीन योजना तयार भएको छ। यो लगानी ए’मसी’सीले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको महत्व र हैसियत प्राप्त गरेको छ,’ उनले भने।
ए’मसी’सी परियोजनाअन्तर्गत नेपालको भूभाग हुँदै भारतको गोरपुरसम्म १२० किलोमिटर लम्बाइको ४०० केभी क्षमताको प्रशारण लाइन विस्तार गर्ने कार्यक्रम हो। त्यसका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सहमति भइसकेको प्रधानमन्त्रीले बताए। ‘नेपालको उत्पादित विद्युत् भारत र बंगलादेश बेच्न बाटो खुलेको छ। अन्य देशमा निर्यात गर्ने बाटो पनि सुनिश्चित भएको छ,’ उनले थपे।